FBC - Naannichi abbootii qabeenyaa waliin mari’achaa jira
Naannichi abbootii qabeenyaa waliin mari’achaa jira
Finfinnee, Ebila 12,2009(FBC)- Mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa abbootii qabeenyaa waliin mari’achaa jira.
Maricha gaggeessuun kan barbaachise, invastimantiirratti hirmaannaan abbootii qabeenyaa dhuunfaa akka cimuufi jedhameera.
Mootummaan deeggarsa abbootii qabeenyaaf taasisu akka cimsu koominikeeshiniin naannichaa ibseera.
Abbootii qabeenyaa maxxanaa fi kiraa sassaabaa waliin garuu gonkumaa balballisaa cufamaadha jedhan obbo Abiyyi Ahimad waltajjii marii abbootii qabeenyaa galma Aadaa Oromootti gaggeeffamaa jiru kanarratti.
Maricharratti abbootiin qabeenyaa hojii invastimantii magaalaa fi baadiyyaarratti bobba’an 1000 ol ta’an kan argaman yammuu ta’u, waltajjicha preezdaantii naannichaa obbo Lammaa Magarsaatu gaggeessaa jira.
Naaannichi gamtaa mootummaa, abbootii qabeenyaa dhuunfaa fi ummataa cimsuun sochii hiyyummaa jalaa ba’uu calqabe kan itti fufsiisu ta'as jedhameera.
Hojii kana karaa iftoomina qabuun hoogganuun akka danda’amu karoora tarsiimawaa (strategic road map) fi wixinee hammattoo seeraa qopheessun kan xumurame yoo ta'u, wixineen hammattoo seeraa qophaa'es qaama dhimmi ilaallatuun mirkanaa'ee hojiitti kan hiikamu ta'a.
Oduuwwan Biroo « Warshaan simiintoo Habashaa toonii miiliyoona 1.4 oomishu ebbifame	Maqaa invastimantiitin qaxxaamuraan duroomuuf kan socho’an irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira- Preezdaant Lammaa »